Ny fitomboan&#39;ny mpianatra
Fiomanana ho amin&#39;ny oniversite sy ny fikarakarana
Score an&#39;ny fanjakana
Ahoana no namaritana ny mari-pahaizana ho an&#39;ny sekoly?
Ny sekoly tsirairay dia mahazo isa ho an'ny marika rehetra azo ampiharina. Ny lanjan'ireo isa-tondro ireo dia mavesatra amin'ny famokarana ny mari-pahaizana famaranana farany an'ny AF, miainga amin'ny marika 0-100. (Loharano data: 2018-2019 taom-pianarana) Mianara bebe kokoa
Sokajy rehefa mandeha ny fotoana
Ny fahaizan&#39;ny mpianatra
Io fambara io dia mandrefy ny fahaizan'ny mpianatra amin'ny fenitra ambaratonga ambony amin'ny teny anglisy / fiteny sy matematika any amin'ny sekoly.
Io fambara io dia mandrefy ny fitomboan'ny mpianatra mankany amin'ny fahaiza-manao ao amin'ny sekoly. Ny mpianatra tsirairay dia mahazo teboka mifototra amin'ny karazana fitomboana aseho (fitomboana kely, fitomboana mahazatra, fitomboana avo). Omena ny isa amin'ny alàlan'ny latabatra fahaiza-manao. Mihoatra ny 100 isa ny sekoly amin'ity metrikô ity.
Ny diplaoma sy ny oniversite ary ny fiomanana amin&#39;ny fikarakarana
Ity famaritana ity dia mandrefy ny fahavitan'ny mpianatra ny fahazoana diplaoma Indiana ao anatin'ny efa-taona sy dimy taona ao an-tsekoly, ary ny fahamarinan'ny mpianatra manondro ny fahavononan'ny postecondary.